How'd it happen and more reports?: ဘလော့ရေးရင်းနှင့် သင့် ဘလော့တွေမှာ ၀င်ငွေရအောင်ရှာတဲ့နည်းလေးပါ
ဘလော့ရေးရင်းနှင့် သင့် ဘလော့တွေမှာ ၀င်ငွေရအောင်ရှာတဲ့နည်းလေးပါ
Internet မှာ ၀င်ငွေ ရှာနေကျတာ အတော်တော်များများ ဖြတ်လမ်းနည်းတွေလိုက်နေကျတာတွေလို့ ဗဟုသုတအနေနှင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ ဒီကျြော်ငာဝင်ငွေတွေနှင့် သင် သူဌေး မဖြစ်နိုင် ပါဘူးလို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်၊
အကယ်၍ သင်ကိုယ်ပိုင် website တွေနှင့် adverting လုပ်ငန်းတခုလိုလုပ်ရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့၊
online ပေါ်မှာ ဈေးရောင်းရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အောင်မြင်နေတဲ့ Website တွေလဲ အများကြီးပါဘဲ၊
ဒါပေမဲ့ Credit card လိုမျိုးနှင့် Internet Banking စနစ်လေးတွေကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်မှာ ဖြစ်နိုင်မှာပါနော်၊ လေကြီးလေကျယ်ပြောတတ်တဲ့ ရွှေဆိုတဲ့အတိုင်းဘဲ ရွှေလူကြီးတွေ တွေ့ရာ ပေါက်ကရလျှောက်ပြောနေတတ်ပြီး ကောင်းတယ်ဟိုလူအကြံပေးလုပ်လိုက်၊ ဒီလူအကြံပေးလုပ် လိုက်နှင့် ဘာတခုမှစနစ်တကျ စီမံကိန်းတွေမလုပ်တတ်မစီမံ့တတ်ကျတာများနေတာကို သင်တို့တတွေ ပြည်သူ လူထု သန်း၆၀ကျော်လက်တွေ့ခံစားနေရမှာပါနော်၊ ဒါဘာလဲဆိုတော့ ဘာမှ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ယခုလက်ရှိလူကြီးတွေကြောင့်ပါ.....ခြွင်းချက်....အဲ.အဲ.. သူတို့နှင့် ဂွင်တည့်တဲ့သူတွေကတော့ အဆင်ပြေ နေတယ်ဗျနော်.....
အခုဟာက Blogger ထဲမှာ ကျော်ငြာတွေထည့်ရင်းင်ငွေရှာတဲ့ နည်းလေးပါ....
ဒါတကယ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ Google Web browser ကနေ သင်ဘလော့လေးတွေမှာ အမှန်တကယ်ကို AdSense က ကျော်ငြာခပေးတဲ့ စနစ်လေးတွေပါ၊ သိပ်ပြီးတော့လဲ လောဘကြီး မနေကျပါနှင့်နော်! သူတို့က ကျော်ငြာကလစ်တချက်နှိပ်မှာ ကလစ်ပေါင်း ၁ထောင်လောက်မှ ၂ ဒေါ်လာလောက်ဘဲပေးတာပါ၊ အောက်မှာကြည့်လိုက်ကျပါအုံး...CPC,Page CTR,Page RTM စနစ်လေးတွေပါ...
ဒါနည်းတွေကဘဲ internet တွေမှာ ကျော်ငြာတဲ့ နည်းလေးတွေ သုံးတာများပါတယ် ဘူပြောများနေတဲ့ ဖွဘူတ်ခေါ်တဲ့ ဖေ့ဘုတ်လဲ ဒီနည်းလေးပါဘဲ....
ဘလော့ရေးတာ ၅နှစ်လောက်ရှိပြီ တော်တော်ကို အားရဖို့ကောင်းတဲ့ adsennse ကကျော်ငြာ ကလစ်သူပေါက်း ၁၄၄၃ လေးပါဘဲ ၊တော်တော်ကို ၀င်ငွေကောင်းပါလားဗျ.....လာလည်တဲ့လူပေါင်း ၁သ်ိန်း ၈သောင်းကျော်တတောင် ပိုက်ပိုက်က $ ၁၀၈ ဘဲ ရသေးတယ်..
Maximum CPC bid - Definition
You'll choose between manual bidding (you choose your bid amounts) and automatic bidding (you setatarget daily budget and the AdWords system automatically adjusts your max. CPC bids on your behalf, with the goal of getting you the most clicks possible within that budget). With manual bidding, you'll set one maximum CPC bid for an entire ad group, but can also set different bids for individual keywords.
For example, if you had5clicks and 1000 impressions, then your CTR would be 0.5%. Here's how it's calculated:
About using CTR to measure traffic to your website
More about Quality Score
Posted by ASNGROUP MYANMAR at Friday, December 05, 2014
Labels: နည်းပညာ, ငွေကြေး